0000 အခုနှဈ ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့အကောငျးဆုံးပှဲဖွဈတဲ့ လီဗာပူးနဲ့မနျစီးတီးပှဲမှာ ဘယျအသငျးနိုငျမလဲ?
လာမယျ့တနင်ျဂနှနေမှေ့ာယှဉျပွိုငျမယျ့ ပရီးမီးယားလိဂျပှဲစဉျဖွဈတဲ့ လီဗာပူးနဲ့ မနျစီးတီးတို့ရဲ့ပှဲစဉျဟာ အခုနှဈ ပရီးမီးယားလိဂျရာသီအတှကျ စိတျဝငျစားဖို့၊ရငျခုနျဖို့အကောငျးဆုံးပှဲတဈပှဲဖွဈပါတယျ။ ဘောလုံးပရိသတျ အမြားစုအာရုံစိုကျနတေဲ့အဲဒီပှဲဟာ နှဈသငျးစလုံးအတှကျ အရေးကွီးပွီး၊ နှဈသငျးစလုံးကလညျး အနိုငျရဖို့ စိတျအားထကျသနျနကွေပါတယျ။ အာဆငျနယျအသငျးရဲ့မနျနဂြောဟောငျး အာဆငျဝငျးဂါးကတော့ လီဗာပူးအနိုငျရနိုငျခွရှေိကွောငျး ထငျမွငျခကျြပေးထားပါတယျ။
အခုနှဈပရီးမီးယားလိဂျရာသီမှာ လီဗာပူးဟာခွစှေမျးကောငျး၊ရလဒျကောငျးနပေါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ ကစားသမြှပှဲတှမှော ရှုံးပှဲမရှိသေးဘဲ၊သရပှေဲနဲ့အနိုငျပှဲတှပေဲရထားတာကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။ မနျစီးတီးအတှကျ အခုပှဲစဉျဟာ တကယျအရေးပါပါတယျ။ ရှကေ့ပွေးနတေဲ့ လီဗာပူးကို အမှီလိုကျဖို့အတှကျ၊အခုလာမယျ့ပှဲစဉျကို အနိုငျကစားနိုငျဖို့လိုပါတယျ။ လီဗာပူး နဲ့ မနျစီးတီး တို့ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျ Title race မှာလညျး အကွိတျအနယျရှိတဲ့ ပွိုငျဆိုငျမှုတှရှေိခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ရာသီကုနျခြိနျမှာတော့ မနျစီးတီးက လီဗာပူးထကျ တဈမှတျအသာနဲ့ ခနျြပီယံဆုကို ကာကှယျသှားနိုငျခဲ့ပါတယျ။
လီဗာပူး-မနျစီးတီးပှဲစဉျနဲ့ပတျသကျတဲ့ စိတျဝငျစားဖှယျကောငျးတဲ့အခကျြတဈခကျြလညျးရှိပါတယျ။ ဒါကတော့ မနျစီးတီးနညျးပွ ဂှာဒီယိုလာရဲ့အငျတာဗြူးအပျေါ လီဗာပူးပရိသတျတှကေ လကျစားခလြေိုစိတျဖွဈပျေါနေ တာဖွဈပါတယျ။ နညျးပွဂှာဒီယိုလာက မာနေး(နာမညျတိုကျရိုကျမပွောပမေယျ့)ဟာ ဒိုငျဗငျပဈတတျတဲ့ ကစားသမားမြိုးဖွဈပွီး၊အဲလို ကစားသမား ကွောငျ့ လီဗာပူးအနနေဲ့ နောကျဆုံးမိနဈအနိုငျဂိုးတှရေရှိနတောဖွဈ တယျဆိုပွီး သှယျဝိုကျပွောဆိုသှားခဲ့ ပါတယျ။ အဲဒီအဖွအေပျေါ လီဗာပူးပရိသတျတှကေ ဒေါသထှကျနကွေပွီး၊ မာနေးဂိုးသှငျးနိုငျခဲ့ပါက နညျးပွ ဂှာဒီယိုလာ ရဲ့ရှမှေ့ာ ဒိုငျဗငျထိုးတဲ့ပုံစံနဲ့အောငျပှဲခံဖို့ ပရိသတျတှကေ လိုလားနကွေတာဖွဈပါတယျ။ တကယျလို့သာ အဲလိုအဖွဈအပကျြမြိုးဖွဈခဲ့မယျဆိုရငျ နညျးပွဂှာဒီယိုလာရဲ့ မကျြနှာ ဘယျလိုဖွဈသှားမလဲဆိုတာကို ပရိသတျတှကေ မွငျခငျြနကွေတာပါ။
ပရိသတျစိတျဝငျစားမှုနှုနျးမြားတဲ့ပှဲဖွဈတာကွောငျ့ နှဈဖကျအသငျးပရိသတျတှေ ရနျမဖွဈစဖေို့အတှကျ လုံခွုံရေးအစီအစဉျမြားကို လုပျဆောငျထားပါတယျ။ နှဈဖကျအသငျးက တာဝနျရှိသူတှဟော ဆိုးသှမျးတဲ့ပရိသတျ တှေ ရနျရှာမှာကိုစိုးရိမျနတေယျဆိုတဲ့သတငျးတှလေညျးထှကျပျေါနပေါတယျ။ မနျစီးတီးဂိုးသမား အီဒါဆငျတဈယောကျ ဒဏျရာအခွအေနကွေောငျ့ လာမယျ့လီဗာပူးနဲ့ပှဲစဉျမှာ ပါဝငျဖို့ကလညျး မသခြောတဲ့ အနအေထားရှိပါတယျ။ သူတငျ၊ကိုယျတငျအပွိုငျကွဲမယျလို့ မြှျောလငျ့ရတဲ့ လီဗာပူးနဲ့မနျစီးတီးပှဲစဉျမှာ ပရိသတျတှအေနနေဲ့ ဘယျအသငျးကိုအားပေးမှာပါလဲ?၊ဘယျအသငျးနိုငျမယျလို့ ထငျပါသလဲ?
အခုနှစ် ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့အကောင်းဆုံးပွဲဖြစ်တဲ့ လီဗာပူးနဲ့မန်စီးတီးပွဲမှာ ဘယ်အသင်းနိုင်မလဲ?
လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာယှဉ်ပြိုင်မယ့် ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ လီဗာပူးနဲ့ မန်စီးတီးတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ဟာ အခုနှစ် ပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီအတွက် စိတ်ဝင်စားဖို့၊ရင်ခုန်ဖို့အကောင်းဆုံးပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘောလုံးပရိသတ် အများစုအာရုံစိုက်နေတဲ့အဲဒီပွဲဟာ နှစ်သင်းစလုံးအတွက် အရေးကြီးပြီး၊ နှစ်သင်းစလုံးကလည်း အနိုင်ရဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေကြပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့မန်နေဂျာဟောင်း အာဆင်ဝင်းဂါးကတော့ လီဗာပူးအနိုင်ရနိုင်ခြေရှိကြောင်း ထင်မြင်ချက်ပေးထားပါတယ်။
အခုနှစ်ပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီမှာ လီဗာပူးဟာခြေစွမ်းကောင်း၊ရလဒ်ကောင်းနေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ကစားသမျှပွဲတွေမှာ ရှုံးပွဲမရှိသေးဘဲ၊သရေပွဲနဲ့အနိုင်ပွဲတွေပဲရထားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ မန်စီးတီးအတွက် အခုပွဲစဉ်ဟာ တကယ်အရေးပါပါတယ်။ ရှေ့ကပြေးနေတဲ့ လီဗာပူးကို အမှီလိုက်ဖို့အတွက်၊အခုလာမယ့်ပွဲစဉ်ကို အနိုင်ကစားနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ လီဗာပူး နဲ့ မန်စီးတီး တို့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် Title race မှာလည်း အကြိတ်အနယ်ရှိတဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရာသီကုန်ချိန်မှာတော့ မန်စီးတီးက လီဗာပူးထက် တစ်မှတ်အသာနဲ့ ချန်ပီယံဆုကို ကာကွယ်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
လီဗာပူး-မန်စီးတီးပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်လည်းရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ မန်စီးတီးနည်းပြ ဂွာဒီယိုလာရဲ့အင်တာဗျူးအပေါ် လီဗာပူးပရိသတ်တွေက လက်စားချေလိုစိတ်ဖြစ်ပေါ်နေ တာဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပြဂွာဒီယိုလာက မာနေး(နာမည်တိုက်ရိုက်မပြောပေမယ့်)ဟာ ဒိုင်ဗင်ပစ်တတ်တဲ့ ကစားသမားမျိုးဖြစ်ပြီး၊အဲလိုကစားသမားကြောင့် လီဗာပူးအနေနဲ့ နောက်ဆုံးမိနစ်အနိုင်ဂိုးတွေရရှိနေတာဖြစ် တယ်ဆိုပြီး သွယ်ဝိုက်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအဖြေအပေါ် လီဗာပူးပရိသတ်တွေက ဒေါသထွက်နေကြပြီး၊ မာနေးဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ပါက နည်းပြ ဂွာဒီယိုလာရဲ့ရှေ့မှာ ဒိုင်ဗင်ထိုးတဲ့ပုံစံနဲ့အောင်ပွဲခံဖို့ ပရိသတ်တွေက လိုလားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့သာ အဲလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် နည်းပြဂွာဒီယိုလာရဲ့ မျက်နှာ ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကို ပရိသတ်တွေက မြင်ချင်နေကြတာပါ။
ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှုနှုန်းများတဲ့ပွဲဖြစ်တာကြောင့် နှစ်ဖက်အသင်းပရိသတ်တွေ ရန်မဖြစ်စေဖို့အတွက် လုံခြုံရေးအစီအစဉ်များကို လုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ နှစ်ဖက်အသင်းက တာဝန်ရှိသူတွေဟာ ဆိုးသွမ်းတဲ့ပရိသတ်တွေ ရန်ရှာမှာကိုစိုးရိမ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ မန်စီးတီးဂိုးသမား အီဒါဆင်တစ်ယောက် ဒဏ်ရာအခြေအနေကြောင့် လာမယ့်လီဗာပူးနဲ့ပွဲစဉ်မှာ ပါဝင်ဖို့ကလည်း မသေချာတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။ သူတင်၊ကိုယ်တင်အပြိုင်ကြဲမယ်လို့ မျှော်လင့်ရတဲ့ လီဗာပူးနဲ့မန်စီးတီးပွဲစဉ်မှာ ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ ဘယ်အသင်းကိုအားပေးမှာပါလဲ?၊ဘယ်အသင်းနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါသလဲ?